TouchCast, fanovana horonan-tsary ary fifampiresahana | Vaovao IPhone
Betsaka ny fampiharana fanovana horonan-tsary ao amin'ny App Store, saingy vitsy no mitovy amin'ny TouchCast. Izy io dia fitaovana fanovana izay hamela anao miaraka amin'izay firaketana an-tsoratra horonan-tsary ary hifanindry singa amin'ny endrika widgets, manamora ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'izy ireo nefa tsy manelingelina ny filalaovana. TouchCast manolotra hevitra mahaliana izay mampifangaro horonan-tsary amin'ny tsara indrindra azon'ny tranonkala atolotra.TouchCast dia rindrambaiko iPad izay mampiseho ny mpampiasa ny mety hijerena mialoha Horonan-tsary TouchCast noforonin'ny orinasa tenany sy ireo mpampiasa hafa TouchCast. Ireto galeriana ireto dia manome ny editor ho hevitra mahaliana momba ny karazana video azo atao.
Fandraisana feo sy fanovana video no tanjaky ny fampiharana. Mba hanombohana tetikasa vaovao dia hanomboka amin'ny alàlan'ny fandraketana horonantsary iray izahay amin'ny alàlan'ny fakantsary eo alohan'ny iPad ary koa ny isan-karazany iombonana atolotry ny fampiharana mihitsy hanombohana.
Raha vao voarakitra ny horonan-tsarinay dia hanohy hanitsy azy izahay. Ho azy ireo, TouchCast dia mampiasa fandaharam-potoana izay mandrindra ireo singa ao aminy, mamela antsika hisintona / handatsaka atiny fanampiny toy ny lohateny sy vApps –Labels izay mampiseho fampahalalana isan-karazany toy ny atiny ao amin'ny Facebook, Twitter, galeriana sary- amin'ny alàlan'ny fampifanarahana mpampiasa minimalista ary mora ampiasaina.
Na izany aza, ny kilema amin'ny fampiharana ity dia ny fanamby ataon'ny mpampiasa azy hafa ny eritreritra rehefa mamokatra horonantsary. Tsy toy ny hafa fampiharana, tsy hoe fotsiny ny manampy sary sy tetezamita ao amin'ny TouchCast, fa ny fampidirana azy singa mifandraika izay manome safidy tsy misy amin'ireo mpanova horonantsary hafa. Ohatra, raha mandrakitra horonantsary iray mamakafaka ny toetran'ny fiara vaovao eny an-tsena isika, rehefa mijery azy dia hanana fahaizana mampiditra ny tranokalan'ny mpanamboatra amin'ny alàlan'ny widget tsotra izahay.
Raha vantany vao vita ny horonantsary ataontsika dia halefa ho azy eo amin'ny fantsona TouchCast izay ahafahan'ny mpampiasa hafa mijery azy, amin'ny fomba mitovy amin'izay azontsika atao hizara azy amin'ny alàlan'ny main haino aman-jery sosialy sy mailaka.
TouchCast dia fampiharana ho an'ny iPad ary misy toy ny maimaim-poana avy amin'ny App Store.
Fanazavana fanampiny - Videolicious, mpamoaka horonantsary maimaimpoana ho an'ny iPad 2
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » TouchCast, fanovana horonan-tsary ary fifampiresahana
Ny bug ao amin'ny iOS 7 beta 2 dia mahatonga ny valiny mikasika ny tsy mandeha ambany bateria 20%
Fizarana iPhone lafo vidy nivory tamin'ny horonan-tsary